Ray na-agwa Ray ihe a. rayhaber.com dị n'ịntanetị ... | RayHaber | raillynews
HomeGeneralRay news bu'ray… rayhaber.com bụ online…
Ray news bu'ray… rayhaber.com bụ online…
09 / 12 / 2011 General, Isi akụkọ
Ebe ntanetị ọhụrụ anyị ebe ị nwere ike ịchọta akụkọ gbasara sistemụ ụgbọ okporo ígwè rayhaber.com dị n'ịntanetị. Ga-enwe ike ịgbanye aka na ntanetị na ebe nrụọrụ weebụ anyị ebe ị nwere ike ịgbaso ụdị akụkọ ozi ụgbọ oloko na usoro nke mba na mba. 1 December Na-amalite ikpe ikpe na 2011 RAYHABERbu n'obi ibu uzo ihe mbu na mpaghara ya na emejuputara ubochi ndi obula.
Prime Minista Erdogan kwupụtara atụmatụ ime ka ụgbọ okporo ígwè dị elu gaa 2023 site na 29 ma kwe nkwa na ọ ga-ewu 10 puku kilomita nke ụgbọ okporo ígwè n'oge a. 45 bụ ihe niile ị na-achọ na nnukwu ụlọ ọrụ a nke a na-eme atụmatụ inye ego $ ijeri RAYHABERỊ ga-achọta.
Malite ikpe na December RAYHABERNá ngwụsị nke ọnwa a, akụkọ ụlọ ọrụ dị ugbu a, usoro ụgbọ okporo ígwè na ụlọ ọrụ, nke usoro akụkọ ụgbọ okporo ígwè dị iche iche site na ozi ọma, usoro okporo ígwè, gụnyere ihe ọmụma niile ị na-achọ ga-ebipụta ọdịnaya jupụtara na map na vidiyo.
Site na magazin anyị, nke a na-ezube ka e bipụta ma kesaa dị ka oge na March n'afọ ọzọ, ụlọ ọrụ anyị ga-agbasa.
Ihe karịrị otu puku mmadụ 2 ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na mpaghara a n'ụlọ na ná mba ọzọ ga-edepụta aha na weebụsaịtị anyị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite ụlọ ọrụ gị n'ụzọ dị irè karị, biko kpọtụrụ anyị.
Oge Prozụta :zụ: Wgbọ ilgbọ okporo andgbọ na Stationgbọ Agwara Iche na Rogbọ okporo andzọ na She nkpagharị…
Ọrụ ije ije na Balıkesir Mbụ na-agafe agafe
Ụlọ okporo ígwè
Ọnụ ọgụgụ na njem na-aga n'okpuru Bosphorus
A ga-emecha ụgbọ okporo ígwè dị n'etiti Istanbul na Ankara na 2013
Ihe ngosi Nkwukọrịta Nkwukọrịta Dijitalụ malitere ịpụta na mpaghara Adana na İzmir mgbe mpaghara Ankara na Istanbul gasịrị. Onye isi nzere nke nchekwa dị n’agbata ụlọ ọrụ nchekwa na ASELSAN [More ...]
Rayhaber Magazine a malitere mbipụta (Akwụkwọ akụkọ pụrụ iche)
Nkwupụta Obi Ụtọ: Ịkwado Ugbo
RayHaber Magazin 6. nọmba bipụtara